Dadka: Walaashii yaraa ee Jordyn Woods ayaa lagu kadeeday dugsiga sababta oo ah arrinta Tristan Thompson - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »Dadka: Walaashii yaraa ee Jordyn Woods ayaa lagu gumaadey dugsiga sababta oo ah arrinta Tristan Thompson
TELES RELAY 26 April 2019
Woko Wanda Dadka, kiisku weli ma dhamaan? Waxaa goobjoog ka ahaa xafladda Hoyashada ee Nigeria Sunday 21 April Jordyn Woods qarsaday dhibaatayn iyadu soo gaartay kiiska Tristan Thompson. Dhibaato sidoo kale waxay la tahay walaasheed, Jodie Woods. Inkaartii Kardashian way horey u dhacday Jodie yar? Kooxda Wanda waxay kuu sheegeysaa wax walba!
Wanda Dadka, xasuuso, bishii Febraayo waxaan idiin sheegnay taas Tristan Thompson, saaxiibka Khloé Kardashianwaxay laheyd "arrin" arrin leh Jordyn Woods, saaxiibka ugu fiican Kylie Jenner. Tan iyo wixii ka soo baxay heshiiska balaadhanJordyn Woods wuxuu ka guuray qabiilka Kardashan. Kaasoo gebi ahaanba go'doon ah, quruxda quruxda badani waxay xitaa u ahayd inay ka guurto saaxiibkeeda hore ee ugu fiican, Kylie Jenner. Ku hadhay xasilloon tan iyo xaqiiqooyinka, gabadha dhalinyarada ah ee 21 sano ayaa isku raacay in ay ka hadlaan in isku xigxiga oo ka mid ah su'aalaha iyo jawaabaha halka ay tahay in Lagos, Nigeria, ku maqnaa ee Hoyashada Festival.
Waar Wanda Dadka, muuqaal ahaan wali waa ay dhaawacmaan, Jordyn Woods ma aysan dhadhanin ereyada oo si cad u hadlay. Booqashadan ayaa si gaar ah loogu sharraxay in ay rabto in ay tusaale u noqoto gabadha sodkorta ah, kaasoo ahaa dhibbanaha dhibaatada bilihii la soo dhaafay.
"Waxaa i dhibay aduunka markii dadku barteen wixii dhacay. Walaasheyga soddogga ayaa lagu dhibaateeyey dugsiga waxaanan u sheegay inaan dunida ku sugayay, " ayay tiri. Mid ayaa qiyaasi kara dhibaatada ay keentay isaga.
sida ay Daily Mail, goos goos ah ee ka dhalatay fadeexadii fadeexadeeda, Tristan Thompson iyo qoyska Kardashian... Drama ku hareeraysan fadeexada ayaa indhaha u furi lahaa haweenka madow ee 2019.
"Markii ugu horreysay ee aan fahamsanahay waxa ay u egtahay dumar madow - oo ah bulsho xaq ah, sidee u noqon karnaa ixtiraam darro? Qofna ma fahmi karo waxa uu sameeyo haddii aadan ku noolayn. "
Wanda Dadka, iyo markii la waydiiyay inay rabto inay noqoto mid saaxiib la ah Kylie, si fudud ayay ugu jawaabtay, "Waxaan haystaa jacayl ku filan qof walba. Kubaddu waxay ku jirtaa xerada Kylie !
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.jewanda-magazine.com/2019/04/people-la-petite-soeur-de-jordyn-woods-se-fait-harceler-a-lecole-a-cause-de-laffaire-tristan-thompson/
ACTU RAP US: Nin lagu tuhunsan yahay Tupac oo lagu xukumay xabsi 10 sano oo xabsi ah oo loogu talagalay tahriibinta maandooriyaha
Youtube: WACS. Guingamp-Marseille: waxay ka heleysaa haweenka ciyaartoyda labada kooxood sawirada